$36.00 $60.00 Manavotra 40% ($24.00)
Red / M Red / L Red / XL Red / XXL Red / XXXL Red / 4XL Red / 5XL Blue / M Blue / L Blue / XL Blue / XXL Blue / XXXL Blue / 4XL Blue / 5XL
Ity Floral Plus Size Sundress ity dia tahaka ny tsy mahazatra toy ny mahazatra. Izany no akanjo tsara indrindra ho an'ireo vehivavy tia ny hafanana amin'ny fararano sy ny fahavaratra ary tia ny masoandro amin'ny sorony. Afaka atao amin'ny takarivan'ny hariva izy io, ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny fianakaviana na rehefa maniry ny hahatsiaro maimaim-poana ianao.
Ny Boho Floral Plus Size Sundress dia vita amin'ny lamba rongony sy kibo ary mahatonga azy ho safidy tsara ho an'ny karazana hafanana mafana. Manana akanjo marevaka sy fitongilana marevaka izy io ary mipetraka tsara amin'ny vatanao. Tsy misy endriny fa ny fitaovana dia natao miaraka amin'ny endriny printy izay mampahatsiahy ny voninkazo sy ny masoandro ny fararano sy ny lohataona.
Azo jerena amin'ny isa maromaro, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, ary 5XL izay midika fa lehibe ny vehivavy rehetra. Izy io koa dia tonga amin'ny lohahevitra roa lehibe: mena sy manga.
Sary mampiavaka ny White & Blue Oversized Dress $89.00
Asian Art Kaftan Maxi Dress $72.00
Asan-trompetra sy lambam-pandriana
Asan-trompetra sy lambam-pandriana $36.00 $60.00
Asymmetric Midi Dress $40.80 $68.00